Kedu mkpokọta NFT ọhụrụ na-abịa na 2022? - Cazoo
Mbido » Mbido » Kedu mkpokọta NFT ọhụrụ na-abịa na 2022?
Tag: Cazoo NFT, Nft, nft.cazoo.it, Na-abụghị fungible tokens
Azịza ya dị nnọọ mfe, Cazoo na-enye ya!
nft.cazoo.it a mụrụ na mmalite 2022 na arịrịọ nke obodo n'onwe ya, nke na-arịwanye elu na-arịọ arịrịọ maka imekọ ihe ọnụ na arịrịọ maka ịmepụta obodo nke ọrụ. Kedu ụzọ ka mma iji nyochaa ụwa nke Tokens na-abụghị Funngible, nke a maara nke ọma dị ka NFT, ọnụ?
Ma onye kwesịrị ịbụ onye na-ese ihe na-emepụta ọrụ dijitalụ ndị a? Azịza ọzọ dị mfe: anyị niile. Ka anyị jide n'aka na ịhọrọ àgwà ọnụ, tozuru oke site n'aka ọtụtụ, ma ka etiti etiti nke ụwa dijitalụ ọhụrụ a dị egwu: teknụzụ iji mepụta ya.
N'adịghị ka ihe ọtụtụ ndị na-eche, iji Artificial Intelligence na nkà ụwa achọghị iṅomi onye na-ese ihe n'onwe ya ma kpuchie ọnụnọ ya. Ee e, ekwenyesiri m ike na AI kama na-eme ka onye ọ bụla nweta ihe okike nka, ọbụlagodi ndị na-ewereghị onwe ha dị ka ndị nka.
Cazoo chọrọ iwetara onye ọ bụla teknụzụ ọhụrụ ndị a.
Anyị bi n'oge ebe enwere ike iji teknụzụ na ọgụgụ isi mee ihe n'ụzọ dị oke egwu, mgbanwe na ụzọ bara uru.
Kọmputa na-agba ọsọ ngwa ngwa, ziri ezi na ndị nzuzu. Ụmụ mmadụ na-adị ngwa ngwa nke ukwuu, ndị na-ezighi ezi na ndị mara mma. Ha jikọtara ọnụ bụ ike karịrị nke a pụrụ ichetụ n'echiche.
Isiokwu bu nke aMetiriks ị ga-atụle maka ịzụrụ na ire NFT
Ọnọdụ NFance Binance: Nchịkọta nke Andy Warhol, Salvador Dalì
NFT: Ntuzi zuru oke maka ịchọta 100x na-esote!